ဗေဒင် Archives - MinSayYar
20th January 2022 Editor
20.Jan.2022 မှ 26.Jan.2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
20.Jan.2022 မှ 26.Jan.2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီအပတ်ထဲမိမိလုပ်ရမဲ့ကိစ္စတွေကို အကြီးအကဲတွေရဲ့ ထောက်ခံချက်ရမှလုပ်သင့်ပါတယ်။ လူငယ်များမိဘ နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလုပ်မိတာ၊ဝန်ထမ်းများဆို အထက်လူကြီးညွှန်ကြားချက်မရဘဲ မိမိသဘောလုပ်လိုက်တာတွေက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်။ မင်းအစိုးရနဲ့ ရန်သူသဖွယ်ဖြစ်နေကြသူများ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ အဖမ်းအဆီးဆိုတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်သော အကူအညီလိုလို့ တောင်းချင်ပေမဲ့ ငွေကံ ညံ့နေတာမို့ အကူအညီရဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အသစ်တစ်ခုခု စမယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းငယ်ချင့်ချိန်ပြီးမှလုပ်ပါ။ မြေစမ်း ခရမ်းပျိုးဆိုတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ သေချာမှပိုင်မှလုပ်စေချင်ပါတယ်။ အလုပ်များ ခရီးများတဲ့ကာလပါပဲ။ တွေးထင်ထား သလို မဖြစ်လာဘဲ မထင်ထားတာတွေဖြစ်လာကြုံလာတတ်တဲ့ကာလပါ။ အိမ်မကပ်ရဘဲ အလုပ်ထဲနဲ့ အခြားကိစ္စ တွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှိသူဆို အိမ်ထောင်ရေးကံအားနည်းနေချိန်ပါ။ အိမ်ထောင်ဘက် အချင်း ချင်းစကားအခြေအတင်များရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်း မ လိုလို နဲ့ အဖျားရှူးသွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာလဲ လုပ်နေပေမဲ့ […]
၇ ရက်သားသမီး အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း (၁၀.၁.၂၀၂၂ မှ ၁၆.၁.၂၀၂၂ အထိ)
၇ ရက်သားသမီး အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း (၁၀.၁.၂၀၂၂ မှ ၁၆.၁.၂၀၂၂ အထိ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား အလုပ်အကိုင် – မလိုအပ်ဘဲ စိတ်ပူပန်မှု များတာ၊ ဟိုဟာလုပ်ချင် ဒီဟာလုပ်ချင်နဲ့ စိတ်က မငြိမ်တာတွေကြောင့် အလုပ်တွေ ထိရောက်သင့် သလောက် မထိရောက်ဘဲ ဖြစ်မယ်။ ကိုယ့်ဘက်က သေချာကြိုးစားရင် အောင်မြင်မှု ရမယ့်ကာလ ဖြစ်မယ်။ လုပ်ငန်းမှာ အခွင့်အရေးတွေ ရလာမယ်။ ငွေကြေးအရလည်း အဆင်ပြေပြေဖြစ်နေမယ်။ ကျန်းမာရေး – အညောင်းထိုင်တာ၊ အကြောအချဉ် မကောင်းတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘေးဥပါဒ် မရှိနိုင်ပါ။ လူမှုအိမ်ထောင် – အရင်တစ်ပတ်က နှစ်ဦးကြားညှိနှိုင်းမရတာလေးတွေ၊ စိတ်ခုစရာတွေ ဒီတစ်ပတ်မှာ ပြန်ပြီးတော့ ပြေလည်မှု ရလာမယ်။ စုံတွဲတွေ၊အိမ်ထောင်ရှင်တွေအဖို့ နားလည်မှု နွေးထွေးမှုတွေ အများကြီး ရလာလိမ့်မယ်။ […]
7th January 2022 Editor
ငွေကံမပွင့်သူများ၊ လာဘ်ပိတ်၍ စိတ်ညစ်နေသူများ သစ်တံခါးဆရာတော်ချီးမြှင့်သော ဒါနအဓိဌာန်လေး ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ
ငွေကံမပွင့်သူများ၊ လာဘ်ပိတ်၍ စိတ်ညစ်နေသူများ သစ်တံခါးဆရာတော်ချီးမြှင့်သော ဒါနအဓိဌာန်လေး ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါငွေကံမပွင့် လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေပါက လုပ်သမျှ မအောင်မြင်ဖြစ်နေပါက မိမိတို့စားမည့်ဆန်အိုးထဲမှ အနည်း ငယ်မျှသောဆန်ကို ယူပြီး မြေကွက်လပ်နေရာတစ်ခု စီစဉ်ပြီး စာကေ လးတှကေို အစာကြှေးပါ။(အာရုံထားပုံ) စိတျထဲမှနပွေီး ယခုဒါနပွုခွငျးသညျ မိမိတို့စားမညျဖွဈသော ဆနျအိုးထဲမှ၊ ဆနျအိတျထဲမှ ခှဲဝေ၍ ဒါနပွုခွငျး၊ အလှူဒါ နပြုခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ ဤမှန်သော သစ္စာစကားတော်ကြောင့် စီးပွားကျ စိတ်ညစ်နေရပြီး ပိတ်ဆို့နေသော လာဘ်လာဘများ ပွင့်ပါစေ၊ လာဘ်လာဘတွေ ရွှင်ပါစေ၊ ငွေဝင်ပါစေ၊ စိတ်မှ ရည်မှန်းပါ။ယခုလာရောက်၍ သုံးဆောင် စားသုံးကြသော စာကလေး၊ ခို၊ ကျီးငှက်ကလေးတွေ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကာ စားသုံးနိုင်၊ ပျော်ရွှင်နိုင်သလို ပျော်ရွှင်ရပါလို၏။ သုံးဆောင်ရပါလို၏။ ဒါနအကျိုး ဆက်၍ တိုးပွားကာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါလို၏ဟု […]
3rd January 2022 Editor
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အပေါင်းအပါများ ပျက်စီးကိန်းကြုံလိမ့်မည်ဟု
လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစတင်ပြီး စကစခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်နှင့်စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များ ပျက်စီးကိန်းကြုံရလိမ့်မည်ဖြစ် ကြောင်းနက္ခတ္တဗေဒကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ဟောကိန်းထုတ်လိုက်သည်။ ယခု ၂၀၂၂ ခုနှစ်သည် ဂြိုလ်သဘောတရားများအရ အလွန်ထူးခြားသော နှစ်ဖြစ်ပြီးအပြောင်း အလဲ ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၏ ဂြိုလ်များ ရပ်တည်မှုသည် အလွန်ထူးခြားကြောင်း ပြောဆိုသည်။ “၂၀၂၁ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ကစပြီး စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ အထူးမြင့်မားလာပြီး၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တိုက်ပွဲများအရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ လဆန်းမှ လလယ်အထိဟာ စစ်ကောင်စီတပ်များ အကျအဆုံးများပြားမယ့် ကာလဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ ဒုတိယပတ်မှာ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ သံတမန်ရေးရာ လှည့် ဖြားမှုတစ်ခု ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ လလယ်မှာ ပြည်သူလူထုကို […]
2nd January 2022 Editor
၂၀၂၂ခုနစ် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း
၂၀၂၂ခုနစ် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တနှစ်စာ ဟောစာတမ်း အင်္ဂါသားသမီးများတို့သည် မိမိ၏ အတွေ့အကြုံများအပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းများတွင် အခွင့်အရေးကောင်းများရရှိပြိး အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ ကုသိုလ်ဒါန၊အလှူတန်းကြီးများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ ဘုရားဖူး ခရီးသွားရကိန်း ရှိသည်။ မမျော်လင့်ဘဲ သားသမီးများအတွက် ရပ်ဝေး၊ နယ်ခြား ကောင်းခြင်းခရီး သွားရကိန်းရှိသည်။ မိမိလက်အောက်ငယ်သား တပည့်များအား ထောက်ပံ့ပေးရတတ်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးများ လေ့လာဆောင်ရွက်ရမည်။ စာပေလေ့လာပြိး လုပ်ငန်းခွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုလျှင် အထူးခံစားခွင့်ရခြင်း၊ စက်မှုလက်မှုပညာရပ်များတွင် အထူးအောင်မြင်မှုရရှိမည်။ ယခုနှစ်တွင် (16. 4. 2022 မှ စ၍ ( 16. 6. 2022) အထိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကျိူးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းမည်။ သစ်သီးဝလံများ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ယာဉ်နှင့်စက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ငွေကြေးကိစ္စများ၊ ထီ၊ […]
29th December 2021 Editor
ဖြစ်ရပ်တွေကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်ယူခံထားရတဲ့ မျက်မမြင်ဆရာမတဦးရဲ့ ဟောကိန်းကို အားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံကဖြစ်ပြီး အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ Baba Vanga ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက အနာဂတ်ဟောကိန်းတွေကို ကြိုတင် တွက်ချက်ကာ ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ချာနိုဘိုင်းနူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုပေါက်ကွဲမှု၊ မင်းသမီးဒိုင်ယာနာသေဆုံးမယ့်အကြောင်းတွေကိုပါ တိကျစွာ ခန့်မှန်းခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက်လည်း သူမက ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေကို ပြောဆိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိကွယ် ခဲ့ပြီးနောက် သူမကို ဘုရားသခင်က အနာဂတ် ကိုမြင်စေနိုင်မယ့် လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်လို့လည်း ဘူလ်ဂေးရီးယား မှော်ဆရာမက ပြောဆိုခဲ့ပြီး Nostrada mus of the Balkans လို့ နာမည်ပြောင်ရထားတဲ့ သူမဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် မှန်ကန်တဲ့ ဟောချက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် သူမရဲ့ဟောကိန်းတွေထဲက သွေးထွက်အောင်မှန်မယ့်အချက်ကတော့ […]
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း 23.12.2021 မှ 29.12.2021 အထိ
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း 23.12.2021 မှ 29.12.2021 အထိ တနင်္ဂနွေ မိမိအတွက် လုပ်ငန်းသစ်၊နယ်ပယ်သစ်တွေနဲ့စတင်ထိတွေ့ခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်။ ငွေကံကောင်းနေပေမဲ့ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရတာမျိုးကြောင့် ငွေသားရှားပါးနေတတ်ပါတယ်။တွေးထင်ထားသမျှ စိတ်ကူးထားသမျှ စီးပွားရေးအလုပ်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ အင်တာဗျူးကိစ္စ၊ရာထူးစာမေးပွဲကိစ္စတွေ သတင်း ကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်။ငွေမမြဲပေမဲ့ ငွေကတော့ ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်။ သားသမီးတွေကိုနေရာပေးခိုင်းစေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းပိုမိုတိုးတတ်လာနိုင်တဲ့ကာလပါပဲ။လူမှုဆက်ဆံရေးအပိုင်းအားကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အလုပ် စီးပွား ကောင်း လာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ကကြီးလာပြီး ငွေမနိုင်တာကြောင့်စပ်တူရှယ်ယာခေါ်ရတာ မျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးက အထူးကောင်းမွန်တယ်။ ရောဂါစွဲကပ်ပြီး တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေသူများ ဒီကာလ အတွင်း သက်သာရာရလာလိမ့်မယ်။ သတိထားရမှာက ရန်များတဲ့ကာလဖြစ်နေတာပါပဲ။ မနာလိုသူ အမြင်စောင်း နေသူတွေများနေမဲ့ကာလပါပဲ။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေလဲသွားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ အချစ်ရေးကံခေနေတတ်ပါ တယ်။ ပညာရေး ဝီရိယထားကြိုးစားလိုက်ပါ။ ကံကြမ္မာက မိမိဘက်မှာရှိပါတယ် အကျိုးပေးဂဏန်း ၉/၂/၆ အထူးဟော အိမ်ထောင်ရေးသောက ကြုံ […]
13th December 2021 Editor
စနေသားသမီးများအတွက် (၁၂) လပိုင်း ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာ အထူးဟောစာတမ်း…
စနေသားသမီးများအတွက် (၁၂) လပိုင်း ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာ အထူးဟောစာတမ်း…အကောင်းအဆိုး မျှနေချိန်လို့ပဲ ပြောရမလား မသိတော့ပါဘူး။ ကံညံလားဆိုတော့ မညံ့ဘူး။ ကောင်းနေလားဆိုတော့လဲ ထင်သလောက် မကောင်းပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးမှုလေးတွေ စန်းပွင့်နေမှုတွေကြောင့် မိမိဗျာများရတတ်တယ်အလုပ်စီးပွားက အတိုက်အခိုက်လေးတွေ ရှိပေမဲ့တိုးတတ်မဲ့သဘော ရှိတယ်။ အဆိုးဆုံးက သူများအကြံပေးလို့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်မိစေနဲ့။ ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်။ မိမိဆုံးဖြတ်ချက် ၊မိမိစိတ်ကူးနဲ့သာ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်သင့်တဲ့အချိန်ပါ။ ငွေကြေးကံ အတော်အသင့်ကောင်းနေသလို လာဘ်လဲရွှင်မဲ့ အချိန်ပါ ။မူလလမ်းကြောင်းကနေ သွေဖယ်ပြီးမသွားသ၍ ဒီအပတ်ဟာ ဇာတာရှင်အတွက် ကံမညံ့ပါဘူးဗျ။ အချစ်ရေးကတော့ စိတ်ကောက်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဖြစ်နေမှာပါ။ ပညာရေးကံကတော့ အကောင်းအဆိုး မျှနေပါတယ်။အထူးဟော = ဖြေးဖြေးမှန်မှန်သာ ဆောင်ရွက်ပါယတြာ = ပန်းအနီရောင် (10) ပွင့်၊ ဖယောင်းတိုင် (10) […]
12th December 2021 Editor
ထီတွေချဲတွေဝေးလို့ ကံစမ်းမဲ ၁၀၀တန်တောင် မပေါက်ဖူးသေးဘူးဆိုတဲ့ ဇာတာရှင်တွေ ဒီနည်းလေးအတိုင်း ပြုလုပ်ကြည့်ပါ
Unicode ချဲတွေထီတွေ မပြောနဲ့ ကံစမ်းမဲဆို ၁၀၀တန်တောင် မပေါက်ဖူးဘူး ဆိုရင် အောက်ပါ အတိုင်းပြုလုပ် ဆောင်ရွက် ပေးပါ သင်တို့အိမ်က ဘုရားတရားဘယ်လောက်လုပ်နေပါစေ အတိုက်အခံမနာလို မုန်းတီးသူများနေတယ် အေးချမ်းခြင်း မရှိဘူးငွေလည်း မဝင်လာဘ် တိတ်နေတယ်ကံ မကောင်းချက်က ချဲတွေ ထီတွေ မပြောနဲ့ ကံစမ်းမဲ ဆို ၁၀၀တန်တောင် မပေါက်ဖူးဘူးဆိုရင်အောက်ပါ အတိုင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ပေးပါ အချိန်တွေနေ့ရက်တွေ မသတ်မှတ် ထားပါ ပြုလုပ်တဲ့ရက်က ပြဿဒါးရက် မဖြစ်ရင်ရပါပြီလိုအပ်တာကတော့ ဖလားရေခွက် သပြေညွန့် ၃ရွက်နဲ့ သရော်ကင်ပွန်း တစ်ထုပ်(ခေါင်းလျော်ရည် လည်း ရပါတယ်) ပြုလုပ်ရမှာက ဖလားထဲ ကိုရေနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည(သရော်ကင်ပွန်း)ဆတူ မပြည့်တပြည့် လောက်ထည့်ပါသပြေညွန့် ၃ရွက်ကို ထည့်ပြီး အောက်ပါ ဂါထာကို ၁၀၈ခေါက်ရွတ်ရင်း မိမိနေထိုင်ရာအိမ်ခြံမြေ ပတ်ပတ်လည်ကို သပြေခက်ဖြင့် […]
သက်ရောက်ရှစ်ပုံ-ဟောမကုန်ဆိုသည့်အတိုင်း ကျွန်တော် ဒီပို့လေး တစ္ခုထဲမွာပဲ သက်ရောက်ရှစ်မျိုးစလုံး ပေါင်း၍ ရေးသွားပါမည်။ သက်ရောက်ဂြိုလ် တွက်နည်းကိုတော့ အောက်ဆုံးတွင် ပုံနှင့် တကြ တွက်ပုံတွက်နည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ တွက်ကြည့်ပြီးမှ ဟောကိန်း ဖတ်ပါရန် . ကဲ မိမိ သကျရောကျဂွိုလျ အလိုကျ ဆောငျရနျ ရှောငျရနျ များ ဖတျရှုနိုငျပါပွီ. (တနင်္ဂနွေဂြိုလ် သက်ရောက်ဟာကိန်း) ဂြိုလ် (၇)ရက် သားသမီး မည်သူမဆို တနင်္ဂနွေ သက်ရောက်သို့ ကျရောက်ပါက. အိမ်သစ်ဝင်ခြင်း။ လုပ်ငန်းသစ်ပေါ်ခြင်း။ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်ခြင်း။ နေရာကောင်းရခြင်း။ ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပါက အိမ်ထောင်ကျတတ်ခြင်း လူအမား၏ အထင်ကြီး ခံရခြင်း။ သူခိုးခိုး ခံရခြင်း။ ဘုရားဖူးခရီးသွားရခြင်း။ ဆွေမျိုးဧည့်သည့် ရောက်လာခြင်း။ အတောင်ပါသော သတ္တဝါ ဝင်လာခြင်း သွတ်သံသစ်ဝင်ခြင်း။ အိမ်သာပြင်ရခြင်း။ […]